Ukuthenga eFinland bangaba hhayi kuphela sesiphila ezithakazelisayo, kodwa futhi ibhizinisi inzuzo, uma kahle asondele nenhlangano yakhe. Noma yimuphi umthengi ezitolo Finnish njalo elinde imikhiqizo kweqiniso European izinga, ngaphandle ithengiswe njalo at isaphulelo eningi. Ungagcina futhi phakathi yokuthengisa ahlukahlukene. Kubantu abaningi eRussia yezitolo izwe elingumakhelwane ayisekho ezingavamile, kodwa kwabanye kungcono kuhlangana kwabo kokuqala ukuthenga angaphandle.
AmaRashiya amaningi njalo ukuhamba nithenga eFinland kusukela Petersburg esifundeni, ukukholelwa ukuthi ukhona ngisho wathenga izinga ilondolo yokuwasha kangcono lokho okuthengiswa Russia, ingasaphathwa-Finnish inhlanzi, ikhofi, nezicathulo, izimpahla zezingane phansi jackets. Kufanele uthi ngesikhathi esisodwa ukuthi nomngcele ophakathi Finland neRussia ingahlanganiswa nolunye emaqenjini izivakashi, kanye ngemoto, kodwa nihambe ngezinyawo ushintsho yayo sinqatshelwe.
EFinland, ukuthengisa sweaters engabizi, sweatshirts, izikibha futhi ovaloli izingane, esakhiwe ngezinto zemvelo. Okucishe Ukwakheka kanye nekhwalithi izingubo Indwangu intsha kanye nabantu abadala, futhi, ayibizi, kanye lesikhumba izicathulo ezinhle.
evumayo kakhulu eFinland futhi ukuthengwa zasendlini, ngoba emva izinga amanani umugqa ngaphambilini kudedelwa izitolo imodeli encishisiwe ngokushesha futhi kakhulu.
Kufanele kuqashelwe ukuthi iningi labantu abakhetha yezitolo e-Finland, ephansi ukubonisa isithakazelo imfashini, ngaphandle, mhlawumbe, we-Finnish downy jackets kanye amajazi, ngoba Finland ayilona izwe-mthetho zomhlaba fashion, kanye ezihlukahlukene endawo Mods uhlolwa ngokuthi "grey" isidina, ungakujabulisi kubantu abasha futhi ikilasi ikakhulukazi imfashini phakathi. Kodwa lapha ungathola njalo eliphezulu izimpahla ezimbonini lemikhiqizo abadumile European ngamanani 30-50% ngaphansana eRussia.
Ethandwa kakhulu phakathi abathengi Russian zonke insipho ejenti ngesandla yokugeza izitsha liquid amaphilisi Umshini wokuwasha izitsha, toothpastes, amashampu futhi isimo. Hhayi ngaphansi ethandwa zokudla yezitolo: inhlanzi, amaqanda, itiye nekhofi, amafutha omnqumo, ushokoledi kanye amaswidi Finnish - konke lokhu ushibhile kakhulu.
AmaRashiya amaningi amazwe aseFinland, ekhaya Imishini, ekhaya impahla kanye ifenisha. Ngaphezu izinga ongenambangi zonke imikhiqizo engenhla, abathengi amadolobha Russian bayazuza ngokwesilinganiso 10-20% uma kuqhathaniswa amanani ekhaya.
Ukuze abathengi Russian Finns ngisho ukudala eziningi izimo ezikhethekile, isibonelo e izinhlanzi esitolo Lappeenranta nabathengisi hhayi kuphela wayihlahlela eluhlaza isidumbu salmon noma trout, kodwa futhi wasusa zonke amathambo lezibopho enosawoti futhi bafafazwe izinongo, okwenza izinhlanzi fresh anosawoti ukulungele "uhambo "eRussia - amasiko iziqondiso, ezokuthutha inhlanzi eluhlaza kanye inyama kungavunyelwe umngcele.
Izinzuzo yezitolo Finland
Labo ongakaze alubhade yezitolo e-Finland, Asingabazi ukuthi lena ezithakazelisayo, okuzuzisayo ezimnandi, unikezwa iqiniso lokuthi sezulu kuleli zwe kufana ngakho Russian, okusho ukuthi ukuyothenga uhambo kungase kungabi njengoba ukhululekile, kokubili endaweni euro elinesimo sezulu ukufudumala. Nokho, konke ukungabaza kungenziwa kwaphela ngumuntu onazo agumenti obungenakuphikwa for yezitolo Finland:
isikhathi esifushane ukuvakasha;
izinga njalo eliphezulu zonke esitolo okuthengiswayo eyenziwe Finland;
ukuyikhokhela, njalo kanye umxhwele izaphulelo kanye nezinzuzo okuthengile kuqhathaniswa izimpahla ekhaya;
Ukuvuselela njalo senhlobo umkhiqizo, ezifana ukuvela onobuhle entsha zasendlini;
ithuba ukuthenga izinto uphawu ngamanani ukuncintisana kakhulu.
Kakhulu inzuzo enkulu, yebo, inqubomgomo intengo ezitolo Finnish. Izimo zethu zihluke kakhulu sisihle abaseRussia (uma ziqhathaniswa imikhiqizo efanayo edolobheni), intengo nayo kakhulu ziyancipha phakathi yokuthengisa. Intengo izinga ngazinye umkhiqizo angawa 70% yezindleko yasekuqaleni. Okunjalo yokuthengisa ezithile zonyaka kukhona ihlobo nobusika, okuvumela ukuba ukuyothenga nomndeni wonke phakathi namaholidi asehlobo noma amaholide ebusika. Kodwa ungakhetha futhi ngezimpelasonto, uma umgomo wakho - yezitolo kancane eFinland.
Izibuyekezo nolwazi jikelele ayikwazi Nokho, ukuqaphela ngokugcwele izinzuzo ezitolo kuleli zwe. Okuhle kunakho konke ukuthi at the stage of uhlela uhambo yezitolo ukwazi izindawo oluthandayo abathengi okwehlela ukumaka amaphuzu ofiselekayo kumephu. Wusizo kuwe futhi amagama ezitolo lapho iningi abathanda ukuhlomisa labo ngokuphindaphindiwe wayekwenza yezitolo e Finland.
Kuphi ukuyothenga? Helsinki
Ngokuvamile, izivakashi esefikile edolobheni ngebhasi, nje uthole kule nxanxathela yezitolo Kampii, ngoba esitolo is kuqondaniswe sebhasi. Kulesi yezitolo ungakwazi ukuthenga imikhiqizo ekhaya nendlu amakhemikhali, izingubo zezingane, izinto zemidlalo nokunye okuningi kusuka okunezinhlobonhlobo kokujwayelekile yezitolo.
Uma kukhethwa senziwa esivuna air travel, ungakwazi ngokushesha saqala ukwenza ukuthenga ku Jumbo shopping centre, etholakala eduze ngokushesha airport Helsinki. Esikhathini yezitolo kukhona izitolo 100 ngokudayisela, izindwangu for ekhaya, izingubo, izicathulo kanye nezinye izinto eyenza Finland.
Ukuthenga ku Helsinki kuhlanganisa ukuvakashela ezihlukahlukene nezinye izitolo ne ezixube imikhiqizo, kodwa yokuthengisa kwezingenhla kungaba ezithakazelisayo kulabo bayashesha noma ayikaqondwa ababeyizazi kwelinye izwe futhi ufuna ukuthenga kuphela iqoqo eminye imikhiqizo ngaphandle kokwesaba bedukile noma ngemva kwesikhathi ukuze indiza ebuyayo.
Lappeenranta City - esiseduzane kuze kube semngceleni we Russian Federation, futhi inani elikhulu kakhulu nezitolo ezinkulu, eziyinxanxathela nakwezinye izitolo ezinobukhulu obuhlukahlukene futhi specialisation. Ngenxa abaseRussia ngokuvamile bamvakashele ekupheleni uhambo.
Wena abanesifiso yezitolo Finland? kufanele ahambe kuphi, kungcono omunye ezitolo ezisemadolobheni ezibaluleke kakhulu - Armada shopping centre, ezazidume ngokutshala Ukukhetha yayo izingubo nezimpahla kwezintandane izilwane. Chosen yizivakashi futhi omkhulu ngempela Family Centre, lapho ungakwazi ukuhamba amahora, uma uthanda, beshiya izingane inakekelwa endaweni wahlomisa ngokukhethekile ekhoneni esitolo, batawuhlala kuphi nobumnandi ngenkathi abazali bazo uthenga. Inzuzo eyengeziwe abathengi iyisici eyodwa ukuvala ngamaRefa yezitolo, kunezinye izitolo eziningi ezincane.
Sekuyisikhathi eside abashayeli Russian bewile RajaMarket umphefumulo - yezitolo, lapho ungakwazi ukuthenga izingxenye ezisele nezinye emphahleni, kanye nemikhiqizo ukudla.
Lo muzi ngokuvamile ekhethwe labo eFinland ukuza ukudla, ngoba kule ndawo futhi isebenze yezitolo odume, lapho ukuthengisa cishe bonke abalimi kwezitshalo nabakhandi ukunikela imikhiqizo yezandla kanye eziyisikhumbuzo. Eduze ungathola inombolo enkulu ezitolo, okuyinto ekahle kakhulu izivakashi.
Ngokwesibonelo, Hansa - kwekulu yezitolo Turku, ithengisa imikhiqizo yendwangu, eliphezulu nezicathulo, izimpahla ezenziwe obuyimvukumvuku, ubucwebe.
Cishe 90 Izitolo ngabanye, sinikeza uhla izimpahla ngamanani ezikhangayo, kungatholakala izindonga Skanssi - yezitolo etholakala engxenyeni esempumalanga Turku.
Lokhu idolobha eliseduze komngcele Finnish-Russian. Kukhona Pasaati esitolo, kungekho ngozi ethandwa phakathi Mods Russian - lapha athengisa i nezimfashini ezithakazelisayo.
Izitolo side by side nge salon izinwele, lapho ikhefu phakathi yezitolo ungenza kwekhanda noma imibala izinwele.
Labo unesithakazelo imikhiqizo eshibhe, umgwaqo ngqo Euromarket - omunye yezitolo isabelomali edume kunazo zonke, wavakashela ngokuphepha ngisho abantu abane nesizotha kakhulu ukuthi isimo sakho sezimali. Futhi abendlu chemical izimpahla kungcono sibheke Robinhood.
Lihlanzekile leli dolobha futhi idume kwesinye isitaladi elide kakhulu (ncamashi 1,100 metres), futhi kulo lonke ubude bayo uye wagxila ezihlukahlukene ezitolo - kusuka kulokulula kufika umnyango okunethezeka ezitolo boutiques.
Njengoba lapha, asinakulishalazela Sekutsenga uchungechunge LIDL, okuyinto lwenteke namaqembu amaningana yomkhiqizo: kusukela ukudla nentengo ephansi izimonyo ekhaya Imishini ingxenye.
Central Area ngeMisombuluko Kayisilutho ngaphandle emakethe enkulu. Ngezinye izinsuku zeviki ungaya kuthi akufane nokwenzeka emakethe enkulu yezitolo izindawo eziseduze.
Lahti itholakala lapho kwakuphambana khona ezohwebo kanye ezokuthutha kwemali, ngakho ukuhweba buyadlondlobala.
Abafundi njalo edonsela Jack & Jones - esitolo inikeza uhla omkhulu wobusha izingubo asezingeni elifanele. Labo abathanda ekuthungeni izingubo ngokwakho, ngokuphelele kumele ukuyovakashela Eurokangas, ukukhetha Indwangu. Ungase futhi ukuthenga amakhethini ngomumo eyenziwe kanye nendwangu lasekhaya.
The main esitolo Lahti - Trio shopping centre, lapho ungathola izingubo, izicathulo, izimonyo, amathoyizi nokunye okuningi. Kulula ukusho ukuthi akuyona kunokuba uhlu lonke uhla imikhiqizo ahlinzekwa, hhayi ithuba, lokhu yezitolo likhona uhlu Izitolo engcono.
Finland. Ukuthenga. ungathengi
Sales eFinland - kuba evamile futhi avamile. Okwamanje, ngenxa crisis jikelele kwezomnotho, laqala ukumemezela ngaphambili futhi uqedele kamuva. masheya bakhumbule ukufika ngaphambi kwesizini entsha. Ngokwesibonelo, amabhayisikili athengisa ekwindla sekwephuzile noma eqhweni ngaphambi ehlobo. izenzakalo ezinjalo wanelisa, ngisho maqondana ukuthunyelwa noma yokulungisa izakhiwo. Kodwa izaphulelo ezithakazelisayo abaningi Finland phakathi yokuthengisa omkhulu ongokwesiko: Juni 21, ngokushesha ngemva Juhannus (Ivana Kupaly Day), ekuqaleni samaholidi nokuncipha ngokuqondene nalesi sidingo umthengi. matasa kakhulu ezitolo Finland ngoJanuwari, njengoba yokuthengisa zihlale emva Christmas (eFinland kuba 25 Disemba), futhi ezinkulu imali okukhulu mayelana nezipho nokungcebeleka imikhosi.
Izikhungo zokuthenga ukuhlela njalo izenzakalo ezikhethekile, uma amasheya imenyezelwa kanyekanye kuzo zonke izitolo itholakala endaweni isikhungo.
Ngaphezu kwalokho, kuyo yonke Hypermarkets Finnish futhi izitolo ngezikhathi ibhekane izinsuku yokuthengisa. Isenzakalo esidume kunazo zonke zibizwa ngokuthi "Izinsuku Crazy" kuhlanganise nezenzo ezinjalo encwadini edumile "Stockmann" futhi "3 + 1" ku "Sokos".
Ehlome ngamathuluzi okuthola nga lo azani we elingangena ngokuphepha wenze yezitolo e Finland ngasiphi isikhathi sonyaka - uhambo ngokuqinisekile kuyoba sijabulise futhi sizuzise hhayi kuphela ukwenza abathandi yezitolo, kodwa futhi ngoba baseRussia babo bonke ubudala abafuna imali yabo, musa skimp on izinga.
Bradycardia - kuyini?
Yezandla ngezinto zemvelo ngezandla zabo: ongakhetha eziningana